Sam Hartman waa Debian's cusub DPL | Laga soo bilaabo Linux
Ka dib markii in ka badan bil ah ku celcelinta hawsha codsiga cusub ee hogaamiyaha mashruuca Debian ama (DPL, oo ​​loo soo gaabiyay Ingiriis), waa geedi socod la waday tan iyo bishii Maarso 10keedii (waad ka akhrisan kartaa qodobka ku saabsan) Xiriirka soo socda).
Hawshani waxay dhammaatay 21-kii Abriil iyadoo la doortay DPL-da cusub. Doorashada ayaa bilaabatay xilli dambe maxaa yeelay markii hore ma jirin musharixiin la diiwaangaliyay. Dhamaadka xilligan DPL Chris Lamb ee xilligiisa bisha Abriil, xilli-sannadeedka cusub ee hoggaamiyeyaasha mashruucu isla markiiba wuu bilaabmi doonaa.
Tan iyo markii doorashadii sanadlaha ahayd ee hogaamiyaha mashruuca Debian ee ay kaqeybgaleen 378 horumariyayaal ayaa lasoo koobay codbixinta, taas oo ah 37% dhammaan kaqeybgalayaasha xaq u leh inay codeeyaan (dadka u soo baxay waxay ahaayeen 33% sanadkii hore, 30 sano kahor kii ugu dambeeyay).
Sannadkan, afar murashax ayaa la magacaabay jagada hogaamiyaha doorashooyinka DPL cusub Debian taas oo ku dhammaatay guushii Sam Hartman, kaalinta labaad waxaa galay Martin Michlmayr, oo uu fadhiyay Jonathan Carter, kaalinta afraad Joerg Jaspert.
1 Yoolalka Sam Hartman ee ah DPL Cusub
2 Xoogaa ku saabsan Sam Hartman
Yoolalka Sam Hartman ee ah DPL Cusub
Aniga oo ah hogaamiyaha mashruuca Debian, Waxaad dooneysaa inaad sare u qaaddo dhageysiga iyo is afgaranwaaga iyadoon laga sii darin oo aad gaarto go'aannada muhiimka ah ee mashruuca si ku habboon waqtigiisa (oo ay ku jirto soo-jeedinta go'aannada guud markay habboon tahay).
Si loo gaaro hadafkan, habab fudud, hufan oo la fahmi karo iyo isdhexgalka ayaa la qorsheeyay, kordhinta soo jiidashada mashruuca Soo-galootiga cusub, hubi abuurista jawi beel saaxiibtinimo iyo is-faham, iyadoo aan loo eegin go'aannada ugu dambeeya ee la gaaro iyo oggolaanshaha ama diidmada fikradaha qaarkood.
inta u dhaxaysa ujeedooyinka ugu waaweyn in hogaamiyaha cusub uu isku dayi doono inuu gaaro, waa abuurista xaalado dadku ku raaxeystaan ​​waqtigooda ku qaadashada ka qeybqaadashada nolosha Debian.
Qeyb ka mid ah ololihiisa wuxuu diirada saaray "sii haynta ciyaarta Debian".
Lucas Nussbaum wuxuu si kooban u soo koobay waajibaadka DPL. Kuwaas, waxaan u maleynayaa in waxa ugu muhiimsan ay tahay in Debian lagu raaxeysto.
Waxaan dooneynaa dadku inay ku raaxaystaan ​​wax ku biirinta Debian si ay mudnaanta u siiyaan jadwalkooda mashquulka badan.
Waxaan rabnaa inaan shaqada u fududeyno dadka: hababka iyo isdhexgalka waa in la fududeeyaa. Markay dadku qabaan tabashooyin ama ay wax hagaagi waayaan, waxaan rabnaa inaan dhageysano oo aan tixgalino waxay rabaan inay dhahaan. Waxaan dooneynaa in Debian ay soo dhaweyso tabarucayaasha cusub.
Debian maahan wax madadaalo leh markii lala kulmo daal, wada hadal dheer iyo kul kulul. Maaha wax madadaalo leh marka aan mashruuc horay u sii socon karin maxaa yeelay ma garan karno sida loo tixgeliyo fikradaheenna ama sida ugu habboon ee wax loogu biirin karo. Debian maahan wax madadaalo leh marka howlaha ama aaladuhu ay dhib badan yihiin.
Marka kooxaha muhiimka ahi ay jabaan ama ay ku dhegaan, Debian maahan wax xiiso u leh xubnaha kooxahaas ama kuwa ku tiirsan.
Debian maahan madadaalo marka aysan amaan aheyn, marka aan nala ixtiraamin, markii nala dhibaateeyay ama markii nala xukumay (halkii fikradaheena). Waxaan taageersanahay Xeerkeena Anshaxa.
Xoogaa ku saabsan Sam Hartman
Sam hartman wuxuu ku soo biiray mashruuca Debian 2000 y bilaabay kaqeybgalkaaga diyaarinta xirmooyinka Kerberos. Halka sanado kale uu daryeelay dayactirka xirmada.
Mar dambe, waan beddelayaa ruble iyo waxaa ka go'an dayactirka iyo abuurista xirmooyinka la xiriira sirta.
Shaqadiisa ugu weyn, Sam Hartman wuxuu ku lug lahaa horumarinta Kerberos iyo halka ayaa ka shaqeynayay mashruuca, Moonshot wuxuu u adeegsaday Debian madal ahaan si loo tijaabiyo hirgelinta habab nabadgelyo oo cusub oo ku saabsan nidaamyada hawlgalka.
Marka lagu daro Sam Hartman muddo dhowr sano ah, wuxuu u adeegay madaxa teknolojiyadda ee MIT ee daladda Kerberos wuxuuna agaasime ka ahaa amniga IETF (Internet Engineering Task Force). Laga soo bilaabo danaha shaqsiyadeed ee loo yaqaan 'DJs, oo ay ku jiraan Sam, wuxuu horumariyaa barnaamijkiisa' DJ '.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato waad la tashan kartaa xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Sam Hartman waa Debian cusub DPL